macOS Sierra dia manana maody maizina mifanentana amin'ireo fampiharana antoko fahatelo | Avy amin'ny mac aho
macOS Sierra dia manana maody maizina mifanentana amin'ireo fampiharana an'ny antoko fahatelo
Ny herinandro lasa teo dia namoaka ny beta ampahibemaso voalohany an'ny macOS Sierra i Apple, izay beta voalohany ho an'ireo mpamorona an'ity kinova ity amin'ny rafitra fiasa amin'ny beta ho an'ny solosaina Mac. mahita fampiasa sy safidy vaovao izay tsy notononin'i Apple tao amin'ny keynote farany teo izay nanolorany ireo rafitra fiasa vaovao izay hahatratra ny besinimaro amin'ny volana septambra.
Ny mpamorona Mac Guilherme Rambo dia nahita fa toa endrika vaovao natsangana tao amin'ny macOS, maody maizina vaovao izay hita fa mifototra amin'ireo fitsapana samihafa nataony, sMety hifanaraka amin'ny fampiharana novolavolain'ny antoko fahatelo. Ny maody maizimaizina dia tsy misy afa-tsy amin'ny menio ambony OS X sy dock.
Ny mahaliana amin'ity zava-baovao ity dia ny tsy nanoloran'i Apple fampahalalana momba azy tamin'ny lahateny farany. Ary tsy notononiny tao amin'ireo atrikasa samihafa izay notanterahin'ilay orinasa nandritra ny andro taorian'ny fihaonambe voalohany. Toa manondro izany fa angamba ho an'i Apple tsy safidy tena mahaliana na ho an'ny mpamorona na ho an'ny mpampiasa, noho izany dia azo inoana fa amin'ny kinova farany dia tsy ho afaka io safidy io raha tena vita ara-potoana sy miasa tanteraka.
Amin'ny alàlan'ny fampiasana fanaraha-maso teratany, Apple dia ho afaka hanamora ny fampifanarahana amin'ny maody maizimaizina izay azo ampiharina amin'ny fampiharana avy amin'ny antoko fahatelo. Apple dia mbola tsy nitatitra an'ity safidy ity tamin'ireo izay vaovao ao amin'ny macOS Sierra, ka mety tsy ho vonona ara-potoana amin'ny famoahana ampahibemaso ny kinova farany amin'ny fararano.
Ny maody maizina amin'ny rindrambaiko dia malaza be tsy hoe fotsiny satria manome antsika fomba fijery tsara sy endrika ivelany, fa koa manampy amin'ny fampihenana ny havizanan'ny maso indrindra rehefa mampiasa Mac amin'ny alina ny mpampiasa, rehefa zara raha tsikaritra ny hazavana manodidina antsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » macOS Sierra dia manana maody maizina mifanentana amin'ireo fampiharana an'ny antoko fahatelo
Tesla sy Google dia miatrika fitoriana amin'ny lozam-pifamoivoizana miaraka amin'ny fiarany "mizaka tena"
Tonga tany Naples ny Akademia mpamolavola iOS eropeana